Vaovao - Manodidina ny 100 ny famokarana goavambe simika, ny fiakaran'ny vidin-javatra?
Hatramin'ny fiandohan'ny taona, ny kodiarana, ny simika, ny vy, ny zezika simika ary ny fiakaran'ny vidim-piainana dia nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny orinasa, voatsindry mafy ny tombom-barotra …… Niakatra ny vidin'ny akora.
Orinasa simika efa ho 100 no nanakana ny famokarana, ary nanampy fanevatevana!
Ny fiakaran'ny vidim-piainana farany dia nampijaly orinasa maro, anisan'izany ny tsy fahampian'ny tsena ara-tsimika sy ny fangatahana. Vao tsy ela akory izay, ny vaovao fa orinasa efa ho 100 eo amin'ny indostrian'ny simia no nijanona niasa tamin'ny famokarana dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny ny tsena simika, izay mety harahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana vaovao.
Ny fanambarana ny orinasa simika manakaiky 100 voarohirohy amin'ny PE, bisphenol A, PC, PP ary zavatra simika hafa. Fantatra fa ny famokarana orinasa, ampahany amin'ny orinasa dia ampahany amin'ny fikojakojana ny fitaovana, eo koa ny ampahany amin'ny fijanonana feno fikojakojana, ora fikolokoloana dia 10-50 andro eo ho eo. Mandritra izany fotoana izany dia nilaza ny orinasa sasany mivantana fa "ny tahiry fanampiny dia tsy be, na ho tapaka"!
Ny fikojakojana ny toeram-pivarotana lehibe, ny firongatry ny famokarana, ny famatsiana akora sarotra kokoa, ny fikoropahana nanomboka ny …… Ankoatr'izay, ny indostrian'ny indostrialy sasany dia efa nampiakatra ny vidiny, ka toa ny fiandohan'ny fiakaran'ny vidim-piainana vaovao azo antoka.
Raha mbola mitombo ny fangatahana dia mety hisy onja vaovao miakatra ny vidim-piainana
Raha ny marina, ny fiakaran'ny vidim-piainana vaovao dia tsy fananganana voajanahary, fa ny fironana The Times. Tokony holazaina fa ny fiandrasana ny fiakaran'ny vidim-piainana dia hita taratra amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana betsaka, ary nantsoina hoe "ny fiakarana entana haingana indrindra hatramin'ny taonjato faha-21 ”.
Tamin'ny voalohany, ny fiakaran'ny vidin'ny vidin-javatra dia tsy niteraka horohoro firy. Betsaka ny ozinina niangona tamin'ny akora efa ela talohan'ny Fetin'ny Lohataona nandritra ny fotoana kelikely, ka miandry ny hamidy ny ankamaroan'ny orinasa rehefa ahena ny vidiny. ny fotoana, orinasa maro be avy any andafy no be loatra, tsy maintsy nampihena ny vidiny.
Saingy, amin'izao fotoana izao, ny fahafahan'ny fiakaran'ny vidim-bokatra akora simika vaovao dia mbola lehibe dia lehibe, ary ny antony dia tsy afa-misaraka amin'ny fitomboan'ny fangatahana sy ny toekarena.
Voalohany, mihombo haingana ny toekarena manerantany ary mitombo ny filan'ny akora simika sy ny entana hafa. Faharoa, ny fandaniana ny $ 1,9 trillion US stimulus package sy ny fiakaran'ny vidim-piainana avo lenta indrindra dia mety hampiroborobo ny fangatahana avy amin'ny sehatra ara-bola.
Niditra tamin'ny volana martsa, ny ankamaroan'ny orinasa dia nanomboka nifandimby niasa, hitombo hatrany ny tinady amin'ny famokarana, ny olana dia lehibe indrindra, ny fiakaran'ny vidim-piainana vaovao dia tsy lavitra…
Ny fiakaran'ny vidim-piainana ho avy dia voatery hisy fiatraikany lehibe eo amin'ny tsena sy ny orinasa indray, orinasa kely sasany manana tombony ambany dia mety hesorina amin'ny sehatry ny indostria, ary izay ho tafavoaka velona no ho matanjaka!